ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်သည်လေထုစင်းလုံးငှားလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ်ပဏီအွန်လိုင်း SEO ဆိုသည်မှာအတိုင်ပင်ခံကျွမ်းကျင်သူကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝန်ဆောင်မှုစျေးကွက်ထဲကိုဘယ်လို! 10Google ကဒစ်ဂျစ်တယ်အင်တာနက် traffic ကိုနှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း x. သင်သည်သင်၏လေကြောင်းလေယာဉ်ငှားရမ်းအတွက်သို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပူခဲကိုဝယ်ခြင်းငှါရှာဖွေနေကြောင်းပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်လေယာဉ်တင်ပဋိညဉ်စာတမ်းကုမ္ပဏီ Are? ကျနော်တို့သင်အွန်လိုင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်အောင်လုပ်ကိုင်နေတဆင့်ပိုပြီးဖောက်သည်ရဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည် (SEO ဆိုသည်မှာ) အင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြော်ငြာ.
ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု Form ကို
လှမ်း 1 ၏ 3
အဘယ်ကြောင့်သင်တို့၏ဖောက်သည်ကိုသင့်ပြိုင်ဖက်ကျော်သင်မှမဝယ်ရန်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း? (သင့်ရဲ့ Value ကိုအဆိုပြု ပတ်သက်. တိကျသောဖြစ်)*
ပုံမှန်အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေ / သံသရာဆိုတာဘာလဲ? EX: ဖောက်သည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, ထို့နောက်ပုံစံကိုဖြည်, ထို့နောက်ရက်ချိန်းစသည်တို့ကိုသတ်မှတ်*
သင့်ရဲ့စံပြ client ကိုအဘယ်သူသည်?*
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ယခင် SEO ဆိုသည်မှာခဲ့ဖူး? ဒါကြောင့် အကယ်., ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဆင့်ကိုစစျဆေးကျေးဇူးပြုပြီး.
အောက် $500 တစ်လလျှင်
အောက် $1000 တစ်လလျှင်
ကျော်လွန် $1000 တစ်လလျှင်
သငျသညျသင်အွန်လိုင်းပစ်မှတ်ထားလိုမယ်လို့စဉ်းစားနိုင်သကဲ့သို့အများအပြားသော့ချက်စာလုံးတွေရေးပါ. (keywords ကိုသင့် website အတွက်မြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမှာ google သို့ရိုက်နှိပ်စကားပေတည်း, ဥပမာအား "ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းအတ္တလန်တာ"*
သငျသညျပစ်မှတ်ထားချင်ပါတယ်ချင်းဝက်နှင့်တိကျသောမြို့များကိုစာရင်းပြုစုပေးပါ. သင့်ရဲ့အမျိုးသားရေးကိုပစ်မှတ်ထားခဲ့လျှင်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရုံရိုက်ထည့်*
သငျသညျစျေးကွက်၏မည်သည့်အခြားပုံစံများလုပ်နေကြ. လျှောက်ထားသောသူအပေါင်းတို့ကို Check?*
SEO ဆိုသည်မှာ (Search Engine Optimization)
PPC (ကိုနှိပ်ပြီး Per ပေးဆောင်)
ပူပြင်းခဲ (Per ခေါ်ရန်ပေးဆောင်)
အော့ဖ်လိုင်းပုံနှိပ်ပါ, ရေဒီယို, မီဒီယာ
သငျသညျသစ်ကိုဖောက်သည်မဆိုအထူးပရိုမိုးရှင်းဆက်ကပ်ပါနဲ့? ဒါကြောင့် အကယ်., အဲဒါတွေကဘာလဲ?*